Mahakasika ny fomba hahitantsika ny fahasambarana no votoatin’ny Tenin’Andriamanitra anio. I Masindahy Paoly Apôstôly, ao amin’ny taratasy fanentanany ireo kristianina tany Efezy no mamboraka amintsika ny tsiambaratelo voalohany : mila mitafy ilay olom-baovao isika. Ka ny maha-olom-baovao antsika dia tsy inona fa ny fananana hamoram-po, halemem-panahy. Noho izany tsy ahitana karazam-pahalotoana sy fitiavan-tena izany hamoram-po sy halemem-panahy lazain’i Masindahy Paoly etoana izany.
Ao amin’ny Salamo voalohany koa no ahitantsika ny tsiambaratelon’ny fahasambarana : « mila mahita fahafinaretana eo am-pitandremana ny Lalàn’Andriamanitra isika raha te ho sambatra ». Midika izany fa tsy mila manaraka ny torohevitry ny ratsy fanahy isika. Tandremo anefa sao mitarika antsika ho hentitra loatra amin’ireo manodidina antsika izay tsy mitsaha-manao soa hatraiza hatraiza izany fitandramentsika ny Lalàn’Andriamanitra izany. Izany mantsy no nitranga tao amin’ny Evanjely anio, ity lehiben’ny sinagoga izany nitezitra ny olona nanatrika ny nanasitran’i Jesoa an’ilay vehivavy tsy nahatraka, tamin’ny andro sabata. Manakana antsika tsy hahatsikaritra ny sitrapon’Andriamanitra mantsy izany, manakana antsika tsy hahita fa manafaka ireo mijaly ny fitiavan’Andriamanitra ka mahatonga azy ireo ho afaka hidera an’Andriamanitra amin’andro Sabata.